Muddo kororsi loo dalbay ra'iisul wasaare Rooble oo laga soo horjeestay
MUQDISHO, Soomaaliya – Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si adag wuxuu uga soo horjeestay muddo kororsi loo dalbay ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble.
Hogaamiyaha xisbi siyaasadeedka Wadajir ayaa wuxuu ku adkeystay in ay doonayaan doorasho waqtigeeda ugu dhacda qaab xor ah.
Dhawaqa wasiirkii hore ee qorsheynta ayaa kusoo hagaagaya maalmo kadib markii Senator Cabdi Xasan Cawaale oo ay isku heeb yihiin Rooble uu iclaamiyey olole uu dheereysi ugu goobayo 57-sano jirkaas.
"Waad og-tihiin aniga ina Farmaajo [madaxweynaha Jamhuuriyadda] wanaag igalama-dhaxeeyo, waxaana u arkaa [in uu yahay]] nin waalan oo been badan, laakiin mar hadii ilaah ka soo qaaday in uu nin beesha ah magacaabay, waa in aanan marnaba ogolanin in uu noqda nin [Ra'iisul Wasaare] afar-biloodle ah oo waqti yar kurisga ku fadhiyay, anagana aan ku karaam," ayuu yiri.
Warsame oo si toos ah ugu jawaabay Qaydiid ayaa ku waaniyey isaga iyo shaqisyaadka lamidka ah in aysan marnaba ku riyoon arrintaas.
"Marka waxaan leeyahay si kaftanaa u sheegayaayee, waxa aan ku kala dhimanayo annaga iyo dadka muddo kororsiga ka cabsanaya meesha ma yaalaan. Waxaan rabnaa doorasho xilligeeda ku dhacda. Waqtigeeda lagu qabta, tii lagu heshiin lahaa ayaan rabnaa, taasaa Soomaali isku wada og-nahay," ayuu ka yiri munaasabad lagu soo dhaweeyay heshiiskii doorashada 2020-21.
Golaha Shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta si aqlabiyad leh codka kalsoonida u siiyey ra'iisul wasaare Rooble taasoo la macno ah "in uu soo dhisi doono xukuumad tayo leh oo saldhigeedu noqon doono sideed  qodob".